Class Code : SFU-PDLSCM-03-01 (Online)
Lecturer : Capt. U Win Naing Nyunt, Warehouse Safety Consultant, Certified Trainer for FIATA, International Freight Forwarding Association Diploma, Certified Trainer for Behaviour Base Safety,
SFU Professional Diploma in Logistics and Supply Chaing Management Online Course
SFU Professional Diploma in Logistics & Supply Chain Management မှာဘာတွေလေ့လာသင်ကြားရမှာလဲ?
မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်မှုများအတွက် ထပ်မံပြင်ဆင်လိုသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များကိုဝင်ရောက်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုသောသူများအတွက် General Management ဒီပလိုမာများရှိသလို၊ သက်ဆိုင်ရာ Career တွင်အထူးပြုကျွမ်းကျင်လိုသူများအတွက်လည်း တက်ရောက်သင့်သော Programme များ ဖြစ်ပါသည်။ Online Platform မှတဆင့် Professional Diploma များကို ကပ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
SFU Professional Diploma in Logistics & Supply Chain Management မှာအဓိက ဘယ်လိုModule တွေသင်ကြားရမှာလဲ ?
Module2– Purchasing & Supply Chain Management
Module3– Distribution Management
Module4-Ethics & Contemporary Issues in Supply Chain Management
*ICM Logistics and Supply Chaing Management Old Student - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (Save)